I-Huawei Shintsha Abakhiqizi | I-China Huawei Shintsha Ifektri & Abahlinzeki
S5730-SI Series Ishintsha
Ukushintshwa kochungechunge lwe-S5730-SI (S5730-SI ngamafuphi) kungukushintshwa okujwayelekile kwesizukulwane se-gigabit Layer 3 Ethernet. Zingasetshenziswa njengokufinyelela noma ukuhlanganiswa kokuhlanganiswa kunethiwekhi ye-campus noma njengenkinobho yokufinyelela esikhungweni sedatha.
Amaswishi ochungechunge we-S5730-SI ahlinzeka ngokufinyelela okugcwele okuguqukayo kwe-gigabit kanye namachweba we-GE uplink angabizi kakhulu. Okwamanje, i-S5730-SI inganikeza ngamachweba we-4 x 40 GE uplink ngekhadi le-interface.
Ukushintshwa kwe-S6300 (i-S6300 ngamafuphi) kungukushintsha okwenziwe ngebhokisi le-10-gigabit yesizukulwane esilandelayo okwenziwe yiHuawei ukuthola amaseva ayi-10-gigabit esikhungweni sedatha namadivayisi aguqukayo kwiMetropolitan Area Network (MAN) noma inethiwekhi ye-campus. I-S6300, enye yamashintshi asebenza kahle kakhulu embonini, ihlinzeka ngobuningi be-24/48-full-line-speed 10-gigabit interface, enikeza ukufinyelela kokuxinana okuphezulu kwamaseva we-10-gigabit esikhungweni sedatha futhi okuphezulu - Ukuhlangana kwesibalo samadivayisi we-10-gigabit kunethiwekhi ye-campus. Ngaphezu kwalokho, i-S6300 inikezela ngezici ezahlukahlukene, izindlela zokulawula ukuphepha ezifanele, nezindlela eziningi zokulawula i-QoS ukuhlangabezana nezidingo zezikhungo zedatha zokunwebeka, ukuthembeka, ukuphatha nokuphepha.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Quidway S5300 gigabit (ngemuva kwalokhu okuzobizwa ngama-S5300s) kungukushintshwa kwesizukulwane esisha se-Ethernet gigabit esakhiwe yiHuawei ukuhlangabezana nezidingo zokufinyelela okuphezulu komkhawulokudonsa kanye nokuhlangana kwezinsizakalo eziningi ze-Ethernet, okunikeza imisebenzi enamandla ye-Ethernet yezinkampani ezithwala namakhasimende ebhizinisi. Ngokuya nge-hardware yesizukulwane esisha esebenza kahle ne-software ye-Huawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5300 ifaka amandla amakhulu kanye ne-gigabit interface yokuqina okukhulu, ihlinzeka ngama-10G uplinks, ahlangabezana nezidingo zamakhasimende zamadivayisi we-1G ne-10G uplink we-high density. I-S5300 ingahlangabezana nezidingo zezimo eziningi ezifana nokuhlangana kwensizakalo kumanethiwekhi we-campus nama-intranethi, ukufinyelela ku-IDC ngezinga le-1000 Mbit / s, nokufinyelela kumakhompyutha ngesilinganiso esingu-1000 Mbit / s kuma-intranethi. I-S5300 iyinsimbi emise okwe-chassis eyi-1 U high. Uchungechunge lwe-S5300 luhlukaniswa ngamamodeli we-SI (ejwayelekile) ne-EI (athuthukisiwe). I-S5300 yenguqulo ye-SI isekela imisebenzi ye-Layer 2 nemisebenzi eyisisekelo ye-Layer 3, futhi i-S5300 yenguqulo ye-EI isekela izivumelwano eziyinkimbinkimbi zomzila kanye nezici zesevisi ecebile. Amamodeli we-S5300 aqukethe i-S5324TP-SI, S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352C-SI, S5352C-EI, S5324TP- PWR-SI, S5328C-PWR -PWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, kanye ne-S5352C-PWR-EI.